Sex – Healthy Life Journal
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ကလေးမရလို့ စိတ်ဆင်းရဲနေပါတယ်ဆရာ။ ကျွန်တော့်မှာ အားနည်းတာပါ။ သုက်ရည်နည်းနေတယ် ဆရာ။ ကျွန်တော့်ကို ဆေးနည်းပေးပါဆရာ။ ချစ်စန်းနိုင် ဘ၀(FB) A. သာမန်လူတွေအနေနဲ့ကတော့ သုက်ရည်နည်းတယ်လို့ ပြောလိုက်တာပါ။ ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့က ဘာသိဖို့...
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ (ကန်တော့ပါ) ၁။ Chlamydia ဆိုတာလေး သိချင်လို့ပါခင်ဗျာ။ ကုသလို့ရလား။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးမှာရှိရင် ကလေးယူသင့်/မယူသင့်၊ ရောဂါက လူကို ဘယ်လောက်အထိ ဒုက္ခပေးနိုင်ပါသလဲ။ ၂။ ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက် ၃၆ ပါ။ သားဦးကိုယ်ဝန် ၅ လထဲမှာပါဆရာ။ ဆေးရုံသွေးစစ်တော့...